पुरुषमा यौ’ न इच्छामा कमि आउनुको ४ संकेत ! – Kavrepati
Home / स्वास्थ्य / पुरुषमा यौ’ न इच्छामा कमि आउनुको ४ संकेत !
पुरुषमा यौ’ न इच्छामा कमि आउनुको ४ संकेत !
admin August 13, 2021	स्वास्थ्य Leaveacomment 160 Views
यौ’ न रोगको विषयमा सामान्यताः पुरुष वा महिला जो कोहि पनि खुलेर कुरा गर्न हिच्किचाउँछन् । तर, चिकित्सकहरुले यौ’ न जीवनलाई ग’ म्भी रतापूर्वक लिन सल्लाह दिने गर्छन् । विशेषगरी, नेपाल र भारतजस्ता देशहरुमा यौ’ न स्वास्थ्यको विषयमा खुलेर कुराकानी गर्ने गरिदैन ।
एक एन्ड्रोलोजिस्ट यौ’ न सँग सम्बन्धित रोगका बारेमा पत्ता लगाएर यसको सही उपचार गर्न सक्छ । एन्ड्रोलोजिस्ट एक विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट हुन् जसले पुरुषहरुमा प्र’ज’ नन् क्षमता र यौ’ न स्वास्थ्यसँग जोडिएका हरेक ग म्भीर तालाई बुझ्न सक्छन् ।
विशेषज्ञका अनुसार यदि कुनै पनि पुरुष यौ’न सँग जोडिएका चार समस्यासँग जुधिरहेका छन् भने उनीहरुलाई तुरुन्त एन्ड्रोलोजिस्टसँग स’ म्पर्क गर्न आवश्यक छ ।
शी घ्रप तन – यदि स’ ह’वासपछि शीघ्रपतन भइरहेको छ भने तपाईं प्रीम्याच्योर एजकुलेशनबाट पीडित हुन सक्नुहुन्छ । यो समस्या प्रायः कम उमेरका व्यक्तिहरुमा देखिन्छ ।
यो समस्या धेरै उमेरका मानिसमा पनि हुनसक्छ । युरो–एन्ड्रोलोजिस्ट्सका अनुसार प्रिम्याच्योर एजाकुलेशन धेरै उमेरका मानिसमा इरेक्टाइल डिसफंक्शनको चे’तावनी संकेत हो । यसले मानिसमा एन्जाइटी डिसअर्डरको समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।
स’ ह’वा स राख्ने इच्छामा कमि – स’ ह’ वा स राख्ने इच्छामा कमि आउनु पनि समस्या मानिन्छ । यो समस्या पुरुष हर्मोन टेस्टोस्टेरोनको मात्रामा कमि हुनुसँग जोडिएको हुन्छ ।
यद्यपि, शरीरमा टेस्टोस्टेरोनसँग सम्बन्ध हाम्रो से’ क्स ड्राइभ, स्पर्म प्रोडक्शन, माशंपेशी, कपाल र हड्डीहरुसँग जोडिएको हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार यो हर्मोनले मानिसको शरीर र मस्तिष्कको मुडलाई प्रभावित पार्ने काम गर्छ ।
डिप्रेशन, एन्जाइटी वा सम्बन्धमा कठिनाइले पनि स’ ह’वास राख्ने इच्छामा कमि आएको हुनसक्छ । यसका साथै, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एन्टीडिप्रेसन्ट जस्ता रोगहरुका कारण पनि यौ’ नइ’ च्छामा कमि आउँछ ।
बाँझोपन- बाँझोपनले पनि ४० देखि ५० प्रतिशत योगदान दिने गर्छ । ग र्भा धारण गर्न अयोग्य हुने प्रमुख कारण असन्तुलित हर्मोन, भे रि को सेले र से’ क्सु’अल डि स फं क्शन हुन् । यसले पुरुषलाई बाँझोपनको शिकार बनाउँछ ।
इरे क्टा इल डिस फंक्शन – स’ ह’वा सका लागि लिं’ ग उ’त्ते’ जित हुन आवश्यक हुन्छ । शारीरिक सम्बन्ध बनाउँदा लिं’ ग उ’त्ते’ जित हुँदैन भने यसलाई पनि चिकित्सकहरुले गम्भीर समस्या भएको बताएका छन् । यो समस्या पुरुषको लिंगसम्म रगत प्रवाह नहुँदा यस्तो समस्या आउँछ ।
Previous असारमा तिर्न नसकेको ब्याज तथा किस्ता पुस मसान्तसम्म तिर्न सकिने
Next झुक्याएर घरमा पसेर सुन चोर्दा चोर्दै समातिए यि युबक, यस्तो सम्म भन्न भ्याएका रहेछन? कसरी छिरे घर भीत्र ? हेर्नुहोस प्रतक्ष्य भिडियो